Sawiro: Maxaa kala socotaa qorshaha lagu mataaneenayo Kismaayo iyo Magaalo ku taalla dalka Turkiga? - Caasimada Online
Home Warar Sawiro: Maxaa kala socotaa qorshaha lagu mataaneenayo Kismaayo iyo Magaalo ku taalla...
Sawiro: Maxaa kala socotaa qorshaha lagu mataaneenayo Kismaayo iyo Magaalo ku taalla dalka Turkiga?
Kismaayo (Caasimadda Online) – Magaalada Kismaayo ayaa looga dhawaaqay in la mattaaneeyay magaalooyinka Antalya ee dalka Turkiga iyo magaalada Kismaayo.
Arrintan ayaa ka danbeysay markii ay Kismaayo booqdeen wafdi ka socday dalka Turkiga oo uu hoggaaminayey madaxa dowladdaha hoose ee dalka Turkiga. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sagootiyay wafdiga Turkiga ee booqasho shqo ku tegay Jubbaland.
Wafdigan ayaa waxaa intuu joogay Jubbaland wuxuu kulamo kala duwan la yeeshay Masuuliyiinta Dowlad Goboleedka Jubbaland iyadoo si qoto dheer looga wada hadlay qaabkii Turkigu uu ku bilaabi lahaa mashaarciida uu ka fulinayo Jubbaland, wuxuuna amaanay mataanaynta Antalya iyo Kismaayo oo uu xusay in ay tahay qorshe weyn oo ay tahay in mudnaan gaar ah la siiyo.
Wafdi ka socday dowladda Turkiga oo socdaal ku joogay Kismaayo ayaa safarkooda soo gaba gabeeyay, waxaana wafdigan hoggaaminayay Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Amb. Olgen Bekar, Xoghayaha Dowladaha Hoose ee Turkiga iyo Mas’uuliyiin kale